Orinasa mpikarakara akrilika | China Acrylic Organizer mpanamboatra, mpamatsy
Acrylic Plastika 3-Komparty mpanamboatra makiazy
Ny acrylic dia manana mangarahara avo, fampitana hazavana 93%.
Ny fanoherana ny toetr'andro tsara na dia ampiasaina amin'ny ety ivelany sy ny hamafin'ny tarehy ary ny famirapiratan'ny fahanterana, ny fahanterana, ny maro loko.
Ny takelaka matevina dia mbola afaka mitazona mangarahara avo.
Izy io dia manana fampisehoana optika tena tsara. Fifandraisana tsy misy poizina, tsy manimba na dia hatramin'ny ela aza.
Rehefa may dia tsy misy gazy mamoaka poizina vokarina. Izy io dia mahazaka hafanana avo 70 ℃ sy maripana ambany -50 ℃.
Manome serivisy namboarina izahay, toy ny habe, ny loko, ny endrika ary ny logo sns.
Vidiny samihafa amin'ny refy na habe samihafa.
1) vita amin'ny akrilika mazava tsara avo lenta miaraka amin'ny mangarahara avo, sariaka ara-tontolo iainana ary tsy misy poizina
2) Fahaizana asa tanana sy fanamboarana tonga lafatra
3) Famolavolana fohy mba haseho tsara kokoa
4) maharitra sy mora diovina
5) fanoherana simika tsara, manohitra ny lozisialy
Mpanamboatra makiazy akrilika
Tanana vita amin'ny akrilika mazava 5mm mazava
24 slot ho an'ny lokomena lava sy lava ary lokam-bolo
Mifanaraka amin'ny volomaso molotra saika ny habeny sy ny habeny
Mifanaraka amin'ny volomaso molotra amin'ny marika rehetra
Hamafa tongotra tsy mikorisa tsy hisolelaka hisorohana ny fivezivezena amin'ny latabatra zava-poana, latabatra ary birao.
Fonosina am-pitandremana anaty boaty matevina sy boaty roa sosona
Organizer ho an'ny dite acrylic
Kalitao avo, azo antoka fitaovana, fisehoana kanto
1. vita amin'ny akrilika matanjaka sy mateza, tsy ho mavo mora foana, azo antoka ny sakafo
2. Ny faritra malalaka 6 dia manome habaka fitehirizana ampy, fanaovana lakozia kely na be olona malalaka, milamina ary hisorohana ny fikorontanana
3. Ny boaty fitehirizana dia afaka mitahiry karazana zavatra isan-karazany, toy ny kitapo dite, crèmeur, kitapo kafe, kafe na kitapo dite eo noho eo, ranon-javatra
Ny boaty fitahirizana dite dia misy sarony. Ny fonosana akrilika mangarahara dia afaka mijery ny atin'ny fitahirizana anatiny ary afaka mitazona ireo entana voatahiry ho madio, tsy misy vovoka ary potipoti-javatra.
Mpandeha kiraro plastika mazava azo raisina
Ireo boaty kiraro ireo dia misy teboka fifandraisana ambony sy ambany, azonao atao ny manangona azy ireo amin'ny alàlan'ny teboka mampifandray.
Ireo boaty kiraro ireo dia vita amin'ny ravina plastika, noho izany dia maivana sy mora mivalona izy ireo, mba hahafahanao mitahiry azy ireo amin'ny toerana kely rehefa ianao
tsy mampiasa azy io.
Mazava ny ampahan'ny varavaran'ny boaty kiraro. Afaka mahita mora foana izay kiraro fitahirizanao.
Mpanamboatra borosy vita amin'ny makiazy akrilika
* MORA MORA NY FIAINANA ANDRO ANAO: Miomàna haingana raha ny volomaso masomaso sy ny masomaso, ny pensilihazo molotra, ny mascara ary ny lokomena dia mora hita maraina, maraina maraina vao manomboka anio, Aza miandry azafady, ampio ny vatosika borosy kosmetika mitondra sarety izao.
* FANOMEZANA PRACTIKA: Hevitra fanomezana lehibe ho an'ny fanomezana ara-barotra, Andron'ny mpifankatia, Fetin'ny Reny, Fisaorana, Krismasy, tsingerintaona na hafa
Size: 3,7 × 3,7 × 8,3 santimetatra.
Mpiorina fizarazarana acrylic Drawer
Karazana plastika ： akrilika
Karazana ： Mpizara zaridaina fitehirizana
Fitaovana ： akrilika
Toerana azo ampiasaina ： Efitra fandraisam-bahiny, lakozia
Teknolojia ： Voasokitra
Vokatra: mpikarakara kosmetika
Karazana fametrahana: Karazana gorodona
Hateviny ： 3mm
No. ny Tiers ： Double
Vovoka porofom-pananganana firavaka plastika
1. fitehirizana fizarana telo sosona
2. Tsy matahotra ny hamandoana ary tsy misy vovoka kokoa
3. tavoahangy avo azo apetraka, fahaiza-manao lehibe
4. Mahavita mijapy flip lehibe
5. Fantsona azo entina, mora entina
6. Fampidirana fizarazarana
7. Fonosana tsy miankina, sombin-tsolika tsy misy simba.
Mazava Acrylic makiazy mpikarakara
Ny Acrylic Storage Collection dia natao ho an'ny fitiavantsika makiazy sy ny fandaminana, saingy manana toerana fitahirizana voafetra.
Ireo mpikarakara fanaovana makiazy eny amin'ny habakabaka ireo, ahafahanao manangona azy ireo malalaka na avo.
Izy ireo dia tonga lafatra na vao manomboka ianao na mihombo ny fiheverana makiazy.
Ny mpikarakara dia azo vidiana tsirairay.
Rehefa mihalehibe ny makiazy dia afaka manampy mora foana amin'ny fanangonana ianao.
Vidio izy ireo ho toy ny bundle mba hitahiry. Akrilika mpilalao 100% vita tanana.
1) vita amin'ny akrilika avo lenta miaraka amin'ny mangarahara avo, sariaka ara-tontolo iainana ary tsy misy poizina.
2) Fahaizana asa tanana sy fanamboarana tonga lafatra.
3) Famolavolana fohy mba haseho tsara kokoa.
4) Maharitra sy mora diovina.
Mpanamboatra menaka manitra akrilika fananganana akrilika
Anaran-javatra: Clear Acrylic Tray Organizer
Fitaovana vokatra: akrilika 100%, Perspex, PMMA, Plexiglass
Loko: Mazava, mangarahara, namboarina
Size: Miankina amin'ny zavatra takinao
Mpanamboatra fitehirizana akrilika matihanina
Vaovao vaovao 100%
Size: 9.4 ″ x7.5 ″ x5.9 ″ / 24x19x15cm
Vita amin'ny akrilika avo lenta
Mety amin'ny fandaminana sy fampisehoana ny makiazy sy ny haingon-tarehy
Mora mikaroka sy mahita ny makiazy
Fonosana: 12 pcs / ctn 59 x 26 x 62.5 cm / ctn GW: 17,5 kgs / ctn
Acrylic Cosmetic fitahirizana fitoeran-javatra Organizer
Kaontenera fitehirizana akrilika
[Vokatra ara-pamokarana]: acrylic matevina 3mm
[Dingana famokarana]: fanapahana, famolahana, fanetezana, famatorana, fizahana kalitao, fanadiovana, fonosana.
[Valin'ny vokatra]: mangarahara
[Loko azo aokisana]: Mena, mavo, manga, maitso, mainty, fotsy, mainty, fitaratra mangatsiaka na loko voatondro manokana
[Fanontana]: Fanontana lamba, fanontana UV, fanontana inkjet, fanamarihana laser, sticker
[Product description]: vokatra maharitra izay mora diovina sy mangarahara toa ny kristaly
Mpanamboatra makiazy akrilika akrilika
FAHASALAMANA LEHIBE - Sariitatra 2 lehibe, vatasarihana 2 kely ary efitrefitra 16 ambony no mitazona borosy makiazy 15 farafahakeliny, 10 lokomena, poleta 8, eyeliners 8, paleta aloky ny maso 3 lehibe ary fanangonana kely hafa isan'andro, mandamina tsara ny makiazy sy ny fitafianao .
MPANORA MAKEUP MAZAVA MAZAVA - vita amin'ny akrilika mazava tsara, mifanaraka amin'ny haingo rehetra!
Ataovy madio sy milamina ny kosmetikao. Avelao ianao hahita haingana izay ilainao amin'ny fitahirizana makiazy mazava.
INTERLOCKING & DETACHABLE - boaty mpikarakara makiazy 3-Piece mifamatotra soa aman-tsara amin'ny mats anti-slip, famolavolana interlocking sy stackable mifanaraka amin'ny vatasarihana hafa mba hahafahanao manao DIY ny mpikarakara makiazy anao manokana.
Azonao atao ihany koa ny manangona vatasarihana misimisy kokoa eo ambonin'ilay fotony na mampiasa azy misaraka.
Azo ampiharina & SASITRANA - Ny lamba misarona azo esorina dia miaro ny firavaka.
Misosa tsara ny vatasarihana.
Tsy handray loko, mora diovina amin'ny rano.
Fanomezana tsara ho an'ny vadinao, ny sakaizanao, ny zanakao vavy na ilay olona manokana amin'ny fiainanao.
Asehoy Acrylic Stand, Stand Acrylic Display, Fako akrilika, Asehoy acrylic, Asehoy Acrylic Stand, Boaty akrilika,